हाँस्दाहाँस्दै रुवाउने नयाँ टेलिश्रिंखला ‘सक्किगोनी’ को भाग ३ हेर्नुहोस् ! – Life Nepali
हाँस्दाहाँस्दै रुवाउने नयाँ टेलिश्रिंखला ‘सक्किगोनी’ को भाग ३ हेर्नुहोस् !
काठमाडौं । हाँस्य टेलिश्रिंखला सक्कीगोनीको भाग ३ प्रशारणसम्म आइपुग्दा यस टेलिश्रिंखलाको लोकप्रियता निकै बढेको छ । ३ भागमै यतिको चर्चामा आउनुको कारण पहिलेको चर्चित भद्रगोल पनि हो । मिडिया हबसँग कुरा नमिलेपछि कुमार कट्टेल (जिग्री) तथा अर्जुन घिमिरे (पाडे) ले सक्किगोनी नामक टेलिश्रिंखला लिएर आएका हुन् । सक्किगोनीमा निर्माण टिमले निकै मेहनत गरेको देखिन्छ । कथा, सम्वाद तथा कलाकारको उत्कृष्ट अभिनयले सबैको मन जितेको छ । यसैबीच हिजो (बिहीबार) प्रशारण भएको तेस्रो एपिसोडमा दर्शकहरु हाँस्दाहाँस्दै भावुक भए । दशैंको रमाइला संवाद र दृश्यबाट सुरु भएको यो श्रिंखला अन्त्यमा वैदेशीक रोजगारीको पीडामा पुगेर टुंङ्ग्याइएको थियो ।
सक्किगोनीको तेस्रो भागमा (युट्युवमा) लगगभ पाँच हजार कमेन्ट आएका छन् भने, पाँच लाख २२ हजारभन्दा बढीले हेरिसकेका छन् । अधिकांश प्रतिक्रियामा सक्किगोनीको यो भाग निकै उत्कृष्ट भएको दर्शकले दिएका छन् । हिजो प्रशारित श्रिंखलामा पात्र वरिष्ठेले पाडे र धतुरेलाई खोरमा बाँधेको, पाडेले जयन्तेलाई भेँडा बनाएर बिक्री गरेको, बले र कक्रोज वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको श्रीमतीसँग नजिकिन खाजेको रमाइला दृश्य र सम्वाद प्रस्तुत छ । तर दसैंको पूर्वसन्ध्यामा एदुमे विदेश जानुपर्ने बाध्यतामा पर्नु र विदेश गएका पुरुषको शव बाकसमा आएको दृश्यले सबैलाई स्तब्ध बनाउँछ ।
जुन औंलाले भोट त्यही औंलाले विदाई : छोरा यदुमेलाई विदाइ गर्ने क्रममा काकुले भनेका शब्द वास्तविक छन्, दसैंको मुखमा यसरी टिका लगाएर बिदा गर्नुपर्दा मलाई दुख लागेको छैन, छोरा । कुनै पनि नेपालीले विदेशिनु नपरोस् भनेर यही औंलाले धेरैपटक भोट हालें मैले । दसैंको मुखमा आज आफ्नै छोरालाई श्रम बेच्न पठाउन यही औंलाले टिका लगाउँदैछु
आफ्नै देशमा मर्न पाइयोस् : श्रिंखलाको अन्त्यमा सन्देश पनि दिइएको छ, बैंकमा आउने रेमिट्यान्स मात्र हेरेर मात्र हुँदैन त्रिभुवन विमानस्थलमा काठको बाकसमा आउने लाश हेर्नुपर्छ । बाकसमा लाश मात्र होइन देशको लाचारता पनि सँगै आउँछ । हामी नेपालीको यही चाहना छ कि सरकार आफ्नै देशमा केही गर्न पाइयोस् । आफ्नै देशको माटोमा मर्न पाइयोस् ।
Previous अब महरा होइन रोशनी जे*ल जादै छन् !
Next संगै काम गरेका पत्रकारको नि*धन भएपछि रवी लामिछाने पुगे श्रदान्जली दिन भिडियो !